साँचो बोल्ने को – तुलसी कि अजयबाबु ? – NEPÆNGLISH
पछिल्लो पोष्ट “नेपालीलाई के को प्लेजिअरिज्म?” मा मैले दुइजना वृतचित्र निर्माताको कानूनी लडाईंको बारेमा केहि लेखेको थिएँ । नयाँ वर्ष सन् २०११ को पूर्वसन्ध्यामा आएको नयाँ समाचारअनुसार अर्का निर्माता तुलसी भण्डारीले आफू अन्यायमा परेको र राजनैतिक षड्यन्त्रको शिकार भएको भनेर माइसंसारमा नेपाल प्रहरीका एस पी रमेश खरेललाई खुला पत्र शिर्षकमा उनले आफूलाई परेको अन्यायको बारेमा लेखेका थिए । त्यसको भोली पल्ट आफूलाई पीडित बताउने र आफ्नो श्रब्य-द्रिश्य चोरि भयो भनेर बताउने अजयबाबु शिवाकोटीले पनि माइसंसारमा “चोरलाई चौतारो किन ?” शिर्षकमा आफ्नो तर्फबाट सत्य-तथ्य कुरा भनेर पत्र लेखी पठाए । मैले दुबैको पत्र पढें । तुलसीले कोक्याप भन्ने संस्थासँग अनुमती मागेर नै त्यो ३ मिनेटको फूटेज आफ्नो वृतचित्रमा राखेको हो भनेका छन् भने, अजयबाबुले भने आफ्नो अनुमतिबेगर त्यसरी आफ्नो सिर्जनाको कसैले दुरुपयोग गरेको कारणले आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि लडेको जनाएर पत्र कोरेका छन् । एकले अर्कामाथि लान्छना लगाउने र आफू पीडित भएको देखाउने निक्कै नै कसरत गरेको पत्रमा देखिन्छ । दुबै पत्रको व्यहोरालाई नियालेर हेर्ने हो भने, कोक्याप भन्ने संस्था, जसले त्यो फूटेज उपलब्ध गरायो, मुख्य दोषी देखिन्छ । अजयबाबु भन्ने व्यक्ति पनि मर्कामा परेको भने सत्य नै हो यद्द्पी उनी पनि कम्ति दोषी भने होइनन् है । कारण ?
आज माइसंसारकै दुई जना पाठकले अजयबाबुको खुल्ला पत्रमा गरिएको टिप्पणीअनुसार पनि उनको हेलचेक्राइँ भएको देखिन्छ । उसले आफ्नो नाम कमाउने धुनमा एउटा विदेशीलाई प्रतिलिपि अधिकारको ख्याल नै नराखी भिडियो उपलब्ध गराएको हो भनि उनलाई नजिकबाट चिन्ने व्यक्तिले नै भनेका छन् । तुलसीले उनको वृतचित्रमा त्यो ३ मिनेटको फूटेज राख्नलाई पनि अजयबाबुलाई ईमेल लेख्दा जवाब नफर्काएको देखिन्छ । तर प्रहरी प्रसाशनमा भने उनले एक तर्फी आफूले तुलसिबाट पाएको ईमेल मात्र पेश गरेका रहेछन् ।
अर्को कुरा, घटनाक्रमलाई विचार्दा अजयबाबुको नियत शंकासपद देखिन्छ । उसको वास्तबिक कानूनी लडाईं तुलसिसँग नभै उसलाई वृतचित्रको फूटेज उपलब्ध गराउने कोक्याप भन्ने संस्थासँग हुनुपर्ने हो । तर उसले त तुलसीलाई धम्क्याउने र क्षतिपुर्ती माग्ने काम गरे । प्रतिलिपी अधिकारको दुरुपयोग यो संस्थाले गरेको अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भैसकेको छ तर यो संस्थाले कति सजिलोसँग सफाइ पाए । उसले सो फूटेज उपलब्ध गराउन आफूसँग प्रतिलिपी अधिकार नभएको भनेको अवस्थामा उसले किन तुलसीलाई त्यो फूटेज प्रयोग गर्ने अधिकारसहितको पत्र दिए ? अजयबाबुले लेखेका छन् कि उनले आफ्नो वृतचित्र निर्माण गर्दा ताका आफ्नो सक्कली नाम खुलाएर लेख्न सक्ने अवस्था नभएकोले छद्मभेषी नाम राखेर बनाएको र कोक्यापले निर्माण गरेको भनेर भिडियोमा लेखिसकेपछि जसले पनि कोक्यापलाई नै त प्रतिलिपी गर्न सोध्ने भयो । यस अर्थमा तुलसीले सो संस्थालाई सोधेर कुनै गल्ती गरेका छैनन् भन्ने मेरो बुझाई छ ।
अजयबाबुको पत्रमा आफू आफ्नो अधिकार बचावमा उभेको भनेर लेखेता पनि वास्तबिक त्यो भन्दा अलि फरक देखिन्छ । उसले तीन विकल्प दिएर तुलसीलाई क्षतिपुर्ती भराउन खोजेका रहेछन् । सरदर सबै नेपाली वृतचित्र ३५ लाख रुपैयाँमा बन्छ । उसको जम्मा माग ३५ लाख नेपाली रुपैयाँ नै हो । त्यहाँ उनी अन्यायमा साँच्चिकै परेकै हो भने पनि उसले त्यसरी ३५ लाखको मोल-मोलाई गरिरहने कुरा होईन । कानूनी उपचार खोज्ने हो । उनी आफैले पनि कानूनी राज्यमाथि अझै पनि विश्वास छ भनेर लेखेका छन् । तुलसीले धेरै देशमा वृतचित्र प्रदर्शन गरिसकेको कारणले उसँग धेरै पैसा होला भनेर अजयबाबुले बार्गेनिङ्ग गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यो बार्गेनिङ्ग पनि कोक्यापसँगै हुनुपर्ने हो । तुलसी त तेश्रो पक्ष मात्र हो । दोश्रो पक्षसँग हुनुपर्ने कुरा कसरी तेश्रो पक्षसँग गरिँदैछ, बुझ्न सकिनँ ।
अजयबाबुले आफ्नो भनेर दावी गरेको श्रब्य-द्रिश्य पनि उनको आफ्नै नभैकन जनआन्दोलनताका उनी कार्यरत ईमेज च्यानलको स्वामित्वमा रहेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको सुनिन्छ । भलै उसले खिचेको र रिपोर्टिङ्ग गरेको होला, तर कुनै संचारमाध्ययममा काम गरेर बाटोमा वा बन्द कोठामा खिचेको श्रब्य-द्रिश्य भनेको कसैको व्यक्तिगत नभै उक्त संघ-संस्थाको स्वामित्व कायम रहन्छ भन्ने कुरा उसले पनि बुझ्नुपर्छ । जसरी उक्त पाठकले यस बिषयमा माइसंसारमा अड्कल काटेअनुसार अहिले ईमेज च्यानेल यस किचलोमा आफूलाई नतानियोस् भन्ने नियतले यो कुरालाई प्रकाशमा नल्याउन सक्छन् । आशा गरौँ, आउँदा दिनमा सत्य-तथ्य बाहिर आउनेछन् र न्याय पाउनुपर्ने व्यक्तिले उचित न्याय पाउनेछन् ।
Satya Maharjan January 2, 2011 May 12, 2016
Previous Previous post: Looking Back at 2010
Next Next post: The Pursuit of Holiness by Jerry Bridges – Audiobooks, MP3, M4B, iPhone Apps, Free Downloads!